स्थानान्तरण प्रतियोगिता भनेको के हो? | गठन र अध्ययन
स्थानान्तरण प्रतियोगिता भनेको के हो?
माइट निक्यूसा | 24/05/2021 21:56 | प्रशिक्षण
निजामती कर्मचारी हुनुको एक लाभ यो हो कि यस पेशागत स्थितिले वित्तीय स्थिरता प्रदान गर्दछ। पहिले नै निश्चित स्थिति भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वर्तमान अवस्था र त्यो सम्भावित अवस्था बिचको सम्बन्ध स्थापित गरेर भविष्यको कल्पना गर्छन्। यद्यपि आर्थिक सुरक्षाले एक अधिकारीको जीवनको व्यावसायिक स्थिरतालाई परिभाषित गर्दछ, यसको मतलब यो होइन कि काम गर्नेहरूको क्यारियरमा परिवर्तनहरू छैनन्। सार्वजनिक प्रशासन। यो यस्तो हुन सक्छ कि कुनै समय, त्यो पेशेवरले अर्को ठाउँमा नयाँ चरण सुरू गर्ने निर्णय गर्दछ।
एउटा परिवर्तन जसले अर्को नगरपालिकामा सर्छ भन्ने संकेत गर्दछ र, त्यसकारण, त्यस पछिसम्म यसलाई कायम गरेको नियमित पछाडि छोड्दै। स्थानान्तरण प्रतियोगिता यस केसमा प्रयोग गरिएको प्रक्रिया मात्र होईनबरु यसको मतलब भनेको क्यारियर सिभिल सेविकाको अन्तिम गन्तव्यको रूपमा चिनिन्छ। त्यो समयमा, पेशेवरले पहिले नै आफ्नो ठाँउको स्वामित्वमा रहेको भने।
1 क्षेत्रीय वा राज्य स्थानान्तरण प्रतियोगिता
2 कसरी गुणस्तर को हस्तान्तरण प्रतिस्पर्धा मा हस्तक्षेप गर्दछ
3 जब राजीनामा पेश गर्ने
क्षेत्रीय वा राज्य स्थानान्तरण प्रतियोगिता
खैर, एक स्थानान्तरण प्रतिस्पर्धा विशेष चासोको छ जो यस परिस्थितिमा छन्। यस प्रक्रियाको माध्यमबाट, एक पेशेवरले अन्य परिवर्तनहरू केन्द्रमा उपलब्ध पदहरूको लागि आवेदन गरेर यस परिवर्तनलाई औपचारिक बनाउन सक्छ। यो प्रतियोगिता स्वायत्त वा राज्य हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धा को प्रकार मा निर्भर गर्दै, गन्तव्य बिभिन्न सन्दर्भ वा अर्कोमा फ्रेम गरिएको छ.
यस प्रक्रियामा, बिभिन्न पक्षहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ, उदाहरणका लागि, गुणहरूको स्केल। यी सुविधाहरूको प्रतिस्पर्धामा तपाईंको आवेदन बुझाउन, यो आवश्यक छ कि तपाईं अर्को कलको प्रकाशनमा सतर्क हुनुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाइँ तपाइँको अनुरोध औपचारिक बनाउन सक्नुहुन्छ। मनमा राख्नुहोस् कि अन्य धेरै पेशेवरहरू पनि यो लक्ष्य प्राप्त गर्न इच्छुक हुन सक्छन्।
कसरी गुणस्तर को हस्तान्तरण प्रतिस्पर्धा मा हस्तक्षेप गर्दछ
यस तरिकाले, गुणहरूको मापन अनुरोधहरू प्रबन्ध गर्न प्रयोग हुने साधनहरू मध्ये एक हो। यो जानकारी रेकर्ड गर्न, पेशेवरले अनुप्रयोगमा आवश्यक कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्रकाशित कलले यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित डाटामा विस्तृत समावेश गर्दछ। प्रतियोगिता को उद्देश्य को हो र को व्याख्या गर्नुहोस्, त्यसकारण कुन पेशेवरले भाग लिन सक्छन्। र यो पनि यो पहल समयमै प्रक्रिया गर्ने तरिका।
यस प्रकारको प्रक्रिया बारम्बार हुन्छ, उदाहरणका लागि शिक्षण क्षेत्रमा। सहभागीहरूले यस उद्देश्यको लागि अन्तिम म्याद सेटमा आफ्ना आवेदन बुझाउनु पर्छ। अन्तिम अधिकारीसँग रिजोलुसन प्रकाशन गर्न सक्षम अधिकृतको जिम्मेवार छ। यस प्रकारको प्रतिस्पर्धा शिक्षा क्षेत्रमा थप क्षेत्रहरूमा प्रशोधन गर्न सकिन्छ।
जब राजीनामा पेश गर्ने
त्यहाँ बिभिन्न परिस्थितिहरू छन् जहाँ पेशेवरले आफ्नो उद्देश्यको बारेमा आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको हुन सक्छ। हुनसक्छ तपाईंको अवस्था परिवर्तन भएको छ र तपाईं प्रतियोगिताबाट पछि हट्न रुचाउनुहुन्छ। यसले अनुरोध रद्द गर्दछ। त्यो अवस्थामा, कलमा त्यो उद्देश्यको लागि प्रदान गरिएको अवधिमा राजीनामा पेश गर्नुपर्नेछ। क्यारियर सिभिल सेवकाईले विपक्षलाई अनुमोदन गर्न धेरै घण्टा अध्ययन समर्पित गरेको छ। यो मुख्य उद्देश्य हासिल गरेको क्षणदेखि, यसले अन्य गुणहरू पनि प्राप्त गर्यो, जुन ती हुन् जुन स्थानान्तरण प्रतियोगिताको मापदण्डमा देखा पर्दछ।
प्रत्येक व्यक्ति एक पेशेवर जीवन परियोजना बनाउँछ परिवार वा व्यक्तिगत स्तर संग प .्क्तिबद्ध। र एक नागरिक कर्मचारी हुनु भनेको योजनाहरु मध्ये एक हो जुन स्थायी पद पाउन चाहनेहरूको कार्य परियोजनाको एक हिस्सा हो। तर त्यहाँ धेरै निर्णयहरू छन् जुन एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनभर आनन्द प्राप्त गर्दछ। र एउटा स्थानान्तरण प्रतियोगिता ती निर्णयहरू मध्ये एक हो जुन प्रेरणालाई उर्जा दिन सक्छ। कसैको स्थानको नजिक हुन चाहन्छ कि उसको लागि भावनात्मक अर्थ हुन्छ।
अर्को कुन प्रश्नहरू तपाइँ स्थानान्तरण प्रतियोगिताको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहानुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » प्रशिक्षण » स्थानान्तरण प्रतियोगिता भनेको के हो?
छात्रवृत्ति फिर्ता नगर्न तपाईले कतिवटा विषयहरू पार गर्नु पर्छ?
एक सामाजिक कार्यकर्ता र एक सामाजिक कार्यकर्ता बीच के भिन्नता छ?